जीवन सफल बनाउने एउटा कला हो 'अल्छी' ! | Ekhabar Nepal
स्वास्थ्य भाद्र ३ २०७५ ekhabarnepal
अल्छी हुनुपनि एउटा कला हो किनभने हामो शरिर र दिमाग पूर्वजका कारण अत्यधिक मेहनत गर्नका लागि प्रोग्राम छ । त्यसकारण कहिलेकाँही अल्छी गरेर ओछ्यानमा सुतिरह्यौं भने समय बर्बाद गरियो भनेर चिन्ता गर्न थाल्छौं । तर विज्ञानले अरु नै भन्छ । विज्ञानका अनुसार अल्छीपन हाम्रो मुटु र दिमागका लागि निकै राम्रो हो । हामी तरिका पुर्याएर अल्छी भयौं भने यसले हामीलाई लामो र स्वस्थ जीवनका लागि निकै फाइदा पुर्उने अनुसन्धानको दाबी छ ।
अल्छीपनको फाइदाहरु :
१. केही नगर्नुहोस्
२. थोरै समयका लागि निदाउनुहोस्
३. दिनभरी टेलिभिजन वा ल्यापटपमा कार्यक्रम हेर्नुहोस्